कसरी म पाठ को रूप मा लिङ्क "VKontakte" संलग्न के?
त्यसैले आज हामी मा लिङ्क "VKontakte" संलग्न कसरी बारेमा कुरा हुनेछ पाठ को रूप। वास्तवमा, यो के गर्न राम्रो सजिलो छ। जहाँ क्लिक गर्न र के छाप्न थाहा मुख्य कुरा। हामीलाई लिंक कसरी बनाउने "VKontakte" हेरौं।
तर हामी हाम्रो प्रश्न सामना गर्न सुरु गर्नु अघि, यो आवश्यक एक बरु महत्वपूर्ण कुरा छलफल गर्न छ। अर्थात्, हामीले पाठ लिंक गर्न के आवश्यक छ? शायद तिमी तिनीहरूलाई बिना गर्न सक्नुहुन्छ?
वास्तवमा, तपाईं मित्र कसैलाई वा समूह वा व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक बताउन, साथै एक मित्र बधाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, वस्तु superfluous हुने छैन। त्यो, यो तपाईं मात्र पोस्ट विविधता मदत गर्नेछ, तर पनि विशिष्ट स्थान (वा व्यक्ति) सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ कि संकेत छ।
एकदम अक्सर, वस्तु विज्ञापन र समीक्षा राख्दै लागि प्रयोग गरिन्छ। म एक घोटाला ठोकर? एउटा सन्देश त निर्माण गर्दै छन्, तपाईं आक्रमणकारीले प्रोफाइल एक सन्दर्भ सम्मिलित - र सबैलाई खराब गर्ने थाह छ। धेरै सुविधाजनक। त्यसैले गरेको कसरी लिंक गर्न "VKontakte" हेर्न दिनुहोस्।
हामी डाटा सङ्कलन
त्यसैले गरेको हामी आवश्यक डाटा निकाल्न सुरु गरौँ। वास्तवमा, यो केवल2गुण आवश्यक हुनेछ। पहिलो - यो तपाईंको सन्देश आविष्कार गरिएको छ। हामी आफ्नो पर्खाल मा, उदाहरणका लागि, यो प्रकाशित हुनेछ। तर दोस्रो वस्तु - यो आईडी-संख्या हाम्रो मित्र वा समूह। हामी पाठ बदल हुनेछ कि भन्ने।
, लिङ्क "VKontakte" संलग्न कसरी को प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जाल लग इन, र त्यसपछि उदाहरणका लागि, तपाईं बधाई गर्न चाहनुहुन्छ जो, आफ्नो साथीको प्रोफाइल, जाने क्रममा। ब्राउजरमा ठेगाना पट्टी हेर्नुहोस्। vk.com/idxxxxxxx: जस्तै केहि त्यहाँ लेखिएको हुनेछ। यहाँ XXXXXXX - यो हामीलाई आवश्यक संख्या जस्तै केही छ।
तर, यो सट्टा कहिलेकाहीं तपाईंले केही देख्न सक्नुहुन्छ अक्षरहरू। डराएको हुन छैन, अब तपाईंले लिङ्क "VKontakte" कसरी संलग्न आंकडा गर्न सक्दैन। यो कुरा यस रेकर्ड एक आईडी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यो तथाकथित छोटो ठेगाना। यो प्रतिलिपि क्लिपबोर्डमा, र त्यसपछि गरेको व्यापार गर्न तल प्राप्त गरौं।
हामी, तपाईंलाई सुरु हुनेछ बाहिर आंकडा पाठ को रूप मा पोस्ट मा लिंक सम्मिलित प्रयोग हाम्रो विशेष संयोजन को प्रारूप कस्तो हुनेछ प्रयास गर्नुहोस्। वास्तवमा, तपाईं पहिले देखि नै एक आईडी-संख्या छ जब, छैन कार्य हुन गाह्रो केही छैन। मुख्य कुरा - लेख्न कसरी र के बुझ्न।
उसोभए, तपाईं पाठ को रूप मा लिङ्क "VKontakte" कसरी संलग्न लाग्छ भने, हामीले निम्न रेकर्ड प्रकार प्रयोग गर्न हुनेछ: पृष्ठ को * [URL | प्रयोगकर्ता टिप्पणी]। अब हामी यसलाई प्रत्येक तत्व के मतलब तपाईं थप विस्तार हेर्नेछु।
पृष्ठ को ठेगाना, तपाईं यसलाई अंदाजा - यो हाम्रो razdobyty प्रयोगकर्ता आईडी छ। यो सबै मा मनमा सार्ने गर्नुपर्छ यो ल्याटिन अक्षरहरू "म" र "घ" संग लिखित पर्छ भनेर। नोट - यो सम्मिलित लिंक को सट्टा प्रदर्शित हुन्छ कि पाठ हो। नियम, यो शब्द वा नाम हो। हामीलाई अब कसरी पाठ एउटा सन्दर्भ समावेश, पोस्ट हेर्न गर्नुपर्छ को एक दृश्य उदाहरण हेरौं। का कसरी "VKontakte" एउटा पोस्ट पाठ को रूप मा लिङ्क गर्न हेरौं।
का, तपाईंलाई सुरु अन्य प्रयोगकर्ता आईडी सिक्न गरौं। हामी आफ्नो जन्मदिन मा उहाँलाई बधाई। खैर, मित्र को प्रोफाइल जाने र त्यसपछि आफ्नो ब्राउजर को ठेगाना लाइन मा हेर्न। ल्याटिन वर्णमा छोटो ठेगाना - - यो हामीलाई आवश्यक संख्या र sssssss छ जहाँ XXXXXXX vk.com/idxxxxx वा vk.com/sssssss,: वहाँ जस्तै केहि हेर्नुहोस्। को बफर मा .डोमेन पछि के आउँछ प्रतिलिपि र पोस्ट लेखन सुरु गर्नुहोस्। हामीलाई निम्नानुसार यो हुनेछ कि मान गरौं: "। धन्य जन्मदिन, मारिया" केटी नाम एउटा सन्दर्भ छ।
वास्तवमा, इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न, हामी लिखित गर्नुपर्छ छन्: "धन्य जन्मदिन, * idxxxxxxx (वा * sssssss) (मरियम)।" अब, तपाईं प्रकाशन गर्न पोस्ट पठाउन भने, तपाईं कसरी नोटिस गर्नेछन् प्रयोगकर्ता नाम यो केटी को प्रोफाइल तपाईं यसलाई होभर गर्दा देखाउनेछ। सबै छ। अब तपाईं एउटा पाठ सन्देश को रूप मा लिङ्क "VKontakte" कसरी संलग्न थाहा छ। केही जटिल।
अद्वितीय आगंतुकों "VKontakte" - ... कसरी अद्वितीय आगंतुकों "VKontakte" हेर्न छ
"सम्पर्कमा" अतिथिहरू: म सम्भव हेर्न
प्राकृतिक खाना। स्तनपान कसरी रोक्न
अभिनेता अलेक्जेन्डर YAkovlev जीवनी, भूमिकाको, फिलिम, मृत्यु र रोचक तथ्य को कारण
यरूशलेम आटिचोक कसरी रोपेर गर्न: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
काम रेकर्ड हराएको भने, के गर्ने? के कर्मचारी काम रेकर्ड हराएको भने?
मटर: लाभ र हानि, ताप गुण
युक्रेनी कप्तान Valery Geleta: जीवनी, क्रियाकलाप र रोचक तथ्य
कम्पनी "स्वत चयन। रूसी संघ।" समीक्षा, वर्णन
निजी घरमा को लागि पट्टी जग उपकरण
"Mikomaks": समीक्षा, सङ्केत गर्छ, प्रयोगको लागि निर्देशन